PressReader - Isolezwe: 2017-09-14 - UZikalala noGumede basasebenza
UZikalala noGumede basasebenza
Isolezwe - 2017-09-14 - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE
ABAHOLI be-ANC KwaZuluNatal, uMnuz Sihle Zikalala onguSihlalo wale nhlangano noSihlalo wesifunda iTheku uNkk Zandile Gumede bathi bayaqhubeka nemisebenzi yenhlangano njengoba isigungu sesifundazwe sinqume ukuthi kudluliswe isinqumo senkantolo yaseMgungundlovu esichithe ingqungquthela yango-2015 yokukhetha ubuholi.
UZikalala, obekhuluma ohlelweni iMorning Live izolo ekuseni, uthe njengoba bedlulisa isinqumo lokho kusho ukuthi isigungu esikhona, asiholayo siyaqhubeka nomsebenzi waso. “Lokhu kusho ukuthi sizoqhubeka sibe sehhovisi. Uma ubuholi bukazwelonke be-ANC bufuna ukungenelela ngoba bungahambisani nesinqumo sethu sizoxoxa nabo.”
UNkk Gumede, oyimeya yeTheku, uthe kunabantu abebesehhovisi lakhe eCity Hall abebefuna ukuzomkhipha.
Ekhuluma esithangamini nabezindaba ebesibizwe uphiko lwabesifazane nolwentsha kulesi sifundazwe izolo, obekukhona kuso nabaholi bezifunda ezehlukene, uNkk Gumede uthe uyaqhubeka nokuba uSihlalo waseThekwini. “Ngizwile ukuthi kukhona abebesehhovisi abebefuna ngiphume, ngisawuyena uSihlalo neMeya yeTheku. Siyaseseka isinqumo sokudlulisa isinqumo senkantolo. Siyasihlonipha isinqumo senkantolo kodwa siyasidlulisa,” kusho uNkk Gumede othe bazohlangana namagatsha ahlukene beyozwa imibono yawo ngesinqumo senkantolo.
UNobhala we-ANC eThekwini, uMnuz Bheki Ntuli, uthe uNkk Gumede uzoba imeya kuze kube u-2021.
Uthe banamagatsha angu110 wathi akangabazi ukuthi azohambisana nokuthi sidluliswe isinqumo senkantolo. “Sizohlangana namagatsha ngeSonto siyokhuluma nawo. Siyaqhubeka nomsebenzi wokuhola isifunda.”
Uthe abebeyokhipha imeya ehhovisi kuyacaca ukuthi abantu abangazi ukuthi izinto zihamba kanjani.
Ebuzwa ngokuthi kungenzeka kuchithwe ingqungquthela yaseThekwini eyayenganyelwe wubuholi obuchithwe yinkantolo, uNtuli uthe inkantolo ikucacisile ukuthi ibheke izinqumo ezithinta ingqungquthela hhayi izinqumo ezathathwa abantu abakhethwa kuyona.
“Siyaqhubeka nomsebenzi, iPhalamende lesifundazwe eliholwa nguNdunankulu uWillies Mchunu liyaqhubeka nomsebenzi.”
Ekhuluma ngemuva kwesinqumo senkantolo eMgungundlovu ngoLwesibili, uMnuz Nhlakanipho Ntombela, ohambisana nohlangothi oluvunwe yinkantolo uthe ubuholi baseThekwini kumele kuthathwe njengento engekho njengoba bakhethwa yisigungu esichithiwe.
THUMELA umbono ngalolu daba kuFacebook (Isolezwe), kuTwitter (@isolezwenews) noma umqhafazo ku-45773. I-sms ibiza R1,50. USIHLALO we-ANC esifundeni iTheku ophinde abe yimeya kuleli dolobha uNkk Zandile Gumede othi uyaqhubeka nomsebenzi wakhe